COVID-19 iyo Tallaallada - Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee Washington, hay'adaha cilmi-baarista, iyo shirkadaha sayniska nolosha ayaa ku sugnaa safka hore ee dagaalka ka dhanka ah COVID-19. Laga soo bilaabo raadinta xogta faafa ilaa raadinta tallaalka ilaa soo saarista neefsashada, Washington waxay qaadatay door hoggaamineed intii lagu jiray cudurkan faafa. Isla mar ahaantaana, fayrasku wuxuu si aan kala sooc lahayn u saameeyay bulshooyinka midabka leh, gaar ahaan shaqaalaha beeraha ee Yakima iyo kooxaha kale ee soogalootiga ah. Waxaan aaminsanahay in tallaabooyin siyaasadeed oo dheeri ah ay lagama maarmaan u yihiin ilaalinta bulshadayada loona hubiyo in qof walba uu marin u helo dhammaan ilaha uu u baahan yahay si uu uga badbaado aafadan.
Testing Tijaabada 'COVID-19' ee agtayda ah
➔ Tallaallada COVID-19 ee aniga ii dhow Ama wac 1-833-829-4357, ka dibna taabo #. Caawinaad luqadeed ayaa la heli karaa.
Qalabka Xiriirka Tallaalka ee COVID-19
Hoos waxaa ku qoran qalab bilaash ah waxaad u isticmaali kartaa inaad ku dhiirrigeliso bukaannada inay iska tallaalaan COVID-19 isla markaana la wadaagaan macluumaadka ku saabsan badbaadada tallaalka. Agabyada daabacan-diyaargarowga ah, waxaan ku soo darnay feylal naqshadaysan iyo noocyada PDF-ga ee walxaha kuu baneynaya inaad si dhaqso leh ugu darto astaantaada, lambarka taleefanka, iyo faahfaahin kale. Agabkan waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Amxaar, Mandarin, Cantonese, iyo Fiitnaam.
Badbaadada Tallaalka Hal-Pager
Hal-ku-dhejis waxaa loo dhiibi karaa bukaanka. Waxaa lagu daabacan karaa warqad daabacan oo caadi ah. Hal-ku-qoridda waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Amxaar, Mandarin, Kantonese, iyo Fiyatnaamiis.
Soo Degso Tallaalka Badbaadada Tallaalka
Ammaanka Talaalka RX Qormada
Dukumintigaan waxaa loogu talagalay in lagu daro farmashiyaha iyo bacaha ilkaha. Waxaa lagu daabacan karaa warqad daabacan oo caadi ah. Dukumeentigaan waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Amxaar, Mandarin, Cantonese, iyo Fiitnaam.
Soo Degso Buugga Badbaadada Tallaalka RX
Tilmaamaha Dhacdada Tallaalka
Template-kaan waxay bixisaa waxyaabo aad u isticmaali karto si aad warbaahinta maxalliga ah uga ogaato dhacdooyinka tallaalka oo dhan. Waxaa lagu tafatiray karaa eray oo lagu daabici karaa madbacad xafiis oo caadi ah.
Soo Degso Template Dhacdada Tallaalka
Qoraalka Badbaadada Tallaalka
Boodhadhkan waxaa lagu soo bandhigi karaa rugta caafimaadka. Cabirkeeda darteed, boodhadhkan waa in lagu daabacaa dukaan xirfadle daabacan, sida FedEx. Boodhadhkan waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Amxaar, Mandarin, Cantonese, iyo Fiitnaam.
Soo Degso Liiska Badbaadada Tallaalka
Qoraalada Warbaahinta Bulshada iyo Nuqul
Qoraalladaan template waxaa loogu talagalay in lagu qoro bartaada Facebook iyo Twitter. Waxaa sidoo kale loo qaybin karaa wada-hawlgalayaasha bulshada si loo kordhiyo macluumaadka badbaadada tallaalka. Sawir gacmeedyada waxaa loogu talagalay in lagu wadaago kaydintaada bulsheed oo ay la socdaan nuqul boostada ah. Qoraalladan qaab-dhismeedka waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Amxaar, Mandarin, Cantonese, iyo Fiitnaam.
➔ Soo Degso Qoraalada Warbaahinta Bulshada oo Nuqul ka samee
Bulshada Weydiimaha Weydiimaha iyo Jawaabaha
Qalabkaan ku siinayaan macluumaad kaa caawinaya sameynta websaydhada xubnaha bulshada ay ku weydiin karaan su'aalaha ku saabsan badbaadada tallaalka. Waxaa ku jira jawaabaha Q&A ee caadiga ah iyo hagitaanka dejinta webinar iyadoo la adeegsanayo zoom.
Soo Degso Jaheynta Weydiimaha Su'aalaha iyo Jawaabaha
Ururka Qaranka ee Xarumaha Caafimaadka Bulshada (NACHC) wuxuu leeyahay isgaarsiin iyo ilo fariin bilaash ah oo aad u adeegsan karto inaad ku dhisto kalsooni talaalka COVID-19 oo aad ku dhiirigeliso shaqaalaha iyo bulshada aad u adeegto inay helaan talaalka oo ay ka caawiyaan kahortaga COVID-19. Waxaa ka mid ah qoraallada warbaahinta bulshada, war-saxaafadeedka tusaalaha ah iyo qoraalka PSA iyo Su'aalaha la Weydiiyo. Qalabkan waxaa lagu heli karaa Haitian Creole, Hmong, Burtuqiis, Shiino Fudud, Soomaali, Isbaanish, Tagalog, Shiine dhaqameed, iyo Fiyatnaamiis.
Soo Degso Qalabka Xiriirka ee NACHC
Shabakadda WAidar ee Soogalootiga WA (WAISN) waxay leedahay hal-bilaash iyo sawir-bixin bilaash ah oo ku saabsan xuquuqda tallaalka COVID-19 ee xubnaha bulshada muhaajiriinta ah oo aad u adeegsan karto dhiirrigelinta qaadashada tallaalka iyo ka-hortagga ka-hortagga COVID-19. Agabkan waxaa lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish.
Soo dejiso WAISN One-Pager iyo Infographics
Raadi ballamaha tallaalka COVID-19
Soogalootiga aan sharciga haysan ee Daryeelka Caafimaadka
Xaq ma u leedahay tallaalka COVID-19?
Dhammaan dadka deggan Washington ee da'doodu tahay 12 ama ka weyn waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka laba-tallaalka ah ee Pfizer COVID-19.
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa leh U ballaadhinta u-qalmitaanka tallaalka COVID-19 qof kasta oo 12 ama ka weyn. Pfizer waa tallaalka kaliya ee la oggol yahay waqtigan loogu talagalay dadka da'doodu tahay 12 illaa 17 waxayna u baahan tahay oggolaansho waalid ama ilaaliye.
Tallaalka Pfizer, oo horeyba loogu oggolaaday dadka jira 16 iyo wixii ka weyn, ayaa la caddeeyey inuu yahay mid ammaan ah oo aad waxtar u leh 12 ilaa 15 sano jir. Talaalida kooxdan da 'yarta ah waxay ilaalin doontaa carruurta waxayna waalidiinta siin doontaa degganaan maskaxeed. Tani waa tallaabada ugu wanaagsan ee qoysasku qaadi karaan si loo hubiyo in carruurtoodu caafimaad qabaan, ku sii jiraan fasalka, si ammaan ah waqti ula qaadan karaan saaxiibadood, ugana qeyb qaadan karaan howlaha ay ka helaan.
Baro waxa loo oggol yahay oggolaanshaha Pfizer ee qoyskaaga ➜
Fadlan isticmaal COVID-19 Helista Tallaalka si loo helo loona ballansado ballan. Markaad jadwal u samaynaysid qof 12 ilaa 17, hubi meesha aad dooratay inay maamusho tallaalka Pfizer, oo ah tallaalka keliya ee hadda loo oggol yahay dadka da'daas ah.
Qof kasta oo raba tallaalka COVID-19 wuu awoodaa inuu helo, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda caymiska caafimaadka. Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad u baahan tahay caawimaad jadwalka ah tallaalka COVID-19, wac 1-833-VAX-CAAWIMAAD (1-833-829-4357), ka dibna taabo #. Caawinaad luqadeed ayaa la heli karaa. DOH waxay u qoondeyneysaa ballamo dadka soo wacaya waxayna ku siin kartaa marinno bilaash ah oo raqiis ah safarro ballamo tallaal.
Dhammaan dadka deggan Washington ee da'doodu tahay 18 ama ka weyn ayaa xaq u leh oo loogu talagalay tallaalka Moderna iyo Johnson & Johnson (J&J), marka lagu daro tallaalka Pfizer. Farqiga ugu weyn ayaa ah in Moderna iyo Pfizer ay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u bixiyaan difaac buuxa, halkii ay ka qaadan lahaayeen hal qiyaas oo ah J&J.
Nolosha Tallaalka Kadib Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
* Dhagsii si aad u aragto jawaabaha ku saabsan nolosha tallaalka ka dib ee gobolka Washington.
Waa maxay “tallaal buuxa” macnaheedu?
Haddii aadan ka soo bixin shuruudahaan, si buuxda MA tihid tallaal. Dadka aan si buuxda loo tallaalin waa inay sii wadaan inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha ee gudaha, sida dukaamada raashinka. Tan waxaa ka mid ah carruurta ka weyn da'da 2. COVID-19 ayaa weli ku sii fidi kara dadka aan la tallaalin iyo qayb ahaan la tallaalay.
Maaskaro looma baahna bannaanka. Dadka aan si buuxda loo tallaalin waxaa lagu dhiirigelinayaa inay xirtaan maaskaro meelaha bannaanka ee dadku ku badan yihiin sida dhacdooyinka isboortiga, carwooyinka iyo riwaayadaha.
Haddii aadan weli si buuxda u tallaalin:
Raadi tallaal COVID-19!
Xidho maaskaro si fiican loo xiray dhammaan goobaha gudaha ee dadweynaha iyo goobaha bannaanka ee dadku ku badan yihiin, sida dhacdooyinka isboortiga, carwooyinka iyo riwaayadaha.
Eeg hagista maaskaro ee DOH oo ku qoran luqado dheeraad ah
Isku soo wada xooriyo kulammada iyo dibedda ama gudaha iyada oo daaqaduhu furan yihiin.
Xidho maaskarada oo kala joog 6 fuudh (2 mitir) kala fog haddii aad la shirayso dadka kale ee aan weli tallaalin.
Haddii uusan qofna reerkaaga qatar ugu jirin jirro daran ee COVID-19, waxaad ku booqan kartaa hal qoys oo tallaal buuxa aan lahayn waji-shareer iyo masaafad jireed.
Iska baar COVID-19 haddii aad isku aragto astaamo ama aad ogtahay inaad la kulantay qof qaba COVID-19.
Sii wad inaad ka fogaato safarka ilaa ay muhiim tahay mooyee. Haddii aad safarto, iska baar COVID-19 safarka ka hor iyo ka dib iyo karantiil muddo toddoba maalmood ah ka dib safarka.
Maxaan sii wadaa marka aan si buuxda u tallaalo?
Dhaqaalaha Washington wuxuu si buuxda u furmay Juun 30. Marka aad si buuxda u tallaasho, waxaad dib u bilaabi kartaa waxqabadyo badan oo aad u joojisay samaynta masiibada awgeed. Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii la tallaalo, waa fikrad wanaagsan inaad maaskaro ku xidho goobaha gudaha ee dadweynaha si loo yareeyo faafitaanka kala duwanaanshaha Delta.
➔ Nolosha Kaddib Tallaalka Su'aalaha La Weydiiyo
Xitaa haddii aad si buuxda u tallaasho, waa inaad weli:
Xushmee sharciyada qolka. Xidho maaskaro si fiican loo xiray iskuullada, gaadiidka dadweynaha, goobaha daryeelka caafimaadka, xarumaha dhaqan celinta, hoyga hoylaawayaasha, iyo ganacsi kasta oo u baahan waji duub.
Is tijaabi haddii aad la kulanto calaamadaha COVID-19.
Raac CDC iyo waaxda caafimaadka talooyinka safarka.
Maxaan bilaabi karaa markaan sameeyo tallaal buuxa?
Isugeynta Si Nabdoon Markaad Talaasho
Markaad si buuxda u tallaasho, adiga:
Booqan kara guri kale iyadoon lakala fogaan ama waji xidhnayn.
Waad ku safri kartaa dalka gudihiisa iyada oo aan la helin tijaabada safarka ka hor ama ka dib. Mana u baahnid inaad karantiil ahaato.
Uma baahnid inaad karantiil ahaato ama aad isbaarto ka dib marka aad la kulanto qof qaba COVID-19 haddii aadan wax calaamado ah lahayn.
Waa inaad ula dhaqantaa kaarkaaga warqadda tallaalka sida shahaadada dhalashada ama dukumiinti kale oo rasmi ah! Sawir ka qaad ka dibna ku keydi guriga. Mustaqbalka, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad caddeyso inaad ka tallaashay COVID-19. Xitaa hadda, meherado badan ayaa deeqo u siiya dadka la tallaalay.
Waa inuu kuu hayaa caddeyn rasmi ah oo tallaal ah. Halkan ka eeg tusaalooyinka: Tilmaamaha Muuqaalka ee Cadeynta Rasmiga ah ee Gobolka Washington ee COVID-19 (PDF)
Xigasho: Waaxda Caafimaadka Washington
Covid-19 Talaalka Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo
* Dhagsii si aad u aragto jawaabaha ku saabsan tallaalka COVID-19 ee gobolka Washington.
Tallaalada COVID-19 ma yihiin kuwo aamin ah? Si dhakhso leh ayey u horumareen, haddaba sideen ku hubsan karaa?
Isticmaalka Tallaalka Johnson & Johnson (J&J) Ayaa Dib Loo Bilaabay
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa leh isla markiiba dib u bilaabay isticmaalka tallaalka Johnson & Johnson (J&J) ee gobolka oo dhan ee loogu talagalay qof kasta oo jira 18 sano ama ka weyn, isagoo raacaya kuwa soo socda hagida FDA iyo CDC. Dib u eegis kadib dhammaan macluumaadka la heli karo, tallaalka J&J ee la yaqaan iyo faa'iidooyinka ka iman kara ayaa ka culus halista la og yahay iyo kuwa halista ah ee loogu talagalay kuwa lagula taliyay inay helaan.
Tallaalka J&J waa la hakiyay 11 maalmood sababo la xiriira warbixinno naadir ah, laakiin waxyeelo daran oo ka soo gaarta xinjirowga dhiigga ee leh platelet hoose (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, or TTS) ee haweenka da'doodu ka yar tahay 50. Saameyntani waa dhif iyo naadir, oo ku dhacda qiyaastii qiyaastii 7 halkii 1 milyan ee haweenka la tallaalay ah ee u dhexeeya 18 iyo 49 sano jir. Haweenka 50 sano jirka ah iyo wixii ka weyn iyo ragga da 'kasta ha lahaadeene, saameyntan dhinaca ayaa xitaa ka dhif ah. Walaaca iyo hakadku waxay la xiriireen oo keliya tallaalka J&J, ee ma ahayn tallaalada Moderna ama Pfizer BioNTech.
Badbaadinta tallaalka COVID-19 ayaa ah mudnaanta koowaad ee gobolka iyo federaalka dawladda, iyo warbixinnada dhibaatooyinka caafimaad ee ka dambeeya tallaalka COVID-19 aad ayaa loo qaadaa si dhab ah. Soo ogaanshaha dhibaatooyinkaas dhifka ah ee naadir ah waxay noo sheegaysaa in nidaamyadii loogu talagalay in lagu ilaaliyo nabadgelyada tallaaladan ay shaqeynayaan. Warbixinnada dhibta naadir ah, laakiin halista ah ee xinjirowga dhiigga ee leh platelet-ka hooseeya ayaa goor hore la ogaaday, hakadku wuxuu ka tarjumayaa sida ay uga go'an tahay dawladda iyo dawladda dhexe ee daahfurnaanta iyo nabadgelyada maadaama CDC iyo FDA ay soo ururiyeen oo ay dib u eegeen xog dheeri ah. Tallaallada COVID-19 waa la marey oo waa la sii wadayaa in lagu sameeyo kormeerka ugu adag ee badbaadada taariikhda Mareykanka.
Haddii aad ka welwelsan tahay halista sii kordheysa ee tallaalka J&J, waxaa la heli karaa tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech COVID-19. Walaaca iyo hakadku wuxuu la xiriiray oo keliya tallaalka J&J, ma ahan tallaalada Moderna ama Pfizer BioNTech. Farqiga ugu weyn ayaa ah in Moderna iyo Pfizer BioNTech ay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u bixiyaan difaac buuxa, halkii ay ka qaadan lahaayeen hal qiyaas oo ah J&J. Fadlan isticmaal COVID-19 Helista Tallaalka si loo helo loona ballansado ballan.
COVID-19 Khiyaanada Tallaalka Busting
CHPW waxay martigelisay guddi khabiir ah oo khibrad leh si looga jawaabo su'aalaha loona baabi'iyo khuraafaadka ku saabsan tallaalada COVID-19. Waa kan duubistii buuxda ee hadalka lagu qabtay Zoom 31-kii Maarso.
Wadahadal Ingiriisi ah
Wadahadalka En Español
Ma jiraan waxyeellooyin? Dhaawaca miyaa xanuunku igu dhacayaa mise xanuun ma i gelinayaa?
Pfizer BioNTech iyo Moderna COVID-19 Tallaalada
Maya! Kama heli kartid tallaalka 'COVID-19'. Ma jiro mid ka mid ah tallaallada la oggol yahay ee COVID-19 ama tallaallada hadda ka socda dalka Mareykanka oo ku jira fayraska nool ee sababa COVID. Tani waxay ka dhigan tahay in tallaalka COVID-19 uusan kugu bukin karin COVID-19.
Waxaan horey uhelay COVID. Miyaan wali u baahanahay in la i tallaalo?
Khubaradu wali ma oga inta aad ka ilaalinaysid inaad markale xanuunsato ka dib markii aad ka bogsatay COVID-19. Xitaa haddii aad horay uga bogsatay COVID-19, waa suurtagal — in kasta oo ay naadir tahay — inaad mar labaad cudurka ku qaadsiiso.
Immisa ayey igu kici doontaa inaan qaato tallaalka COVID?
Miyaa tallaalka COVID-19 lagu tijaabiyey beelaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka midabbada leh?
Tallaallada COVID-19 waxaa lagu tijaabiyay tijaabooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin tobanaan kun oo qof oo ka socda dhammaan jinsiyadaha iyo qowmiyadaha - kuwaas oo bixiyay ogolaanshahooda — si loo hubiyo in tallaalladu ay yihiin kuwo nabdoon.
Haddii aad uur leedahay, aad naas nuujineyso, ama aad qorsheyneyso inaad uur yeelato, the Kuleejka Dhakhaatiirta Haweenka iyo Dhakhaatiirta Haweenka ee Mareykanka (ACOG) waxay si adag kugula talineysaa inaad kala hadasho bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga inuu talaalku adiga kugu haboon yahay iyo inkale, iyadoo lagu saleynayo halista aad ugu jirto COVID-19.
Mar alla markaan helo tallaalka COVID-19, waa layga ilaaliyaa nolosha, sax?
Tallaallada COVID mar dhow ayaa la soo saaray, markaa waa xilli hore in la ogaado muddada ay ku difaacayaan. Waxaa jira cilmi baaris socota oo looga jawaabayo su'aashan.
Waxa aan ognahay ayaa ah in COVID-19 uu dad badan u keenay cudur aad u daran iyo geeri. Haddii aad hesho COVID-19, waxaad sidoo kale halis ugu jirtaa inaad siiso kuwa aad jeceshahay ee laga yaabo inay aad u bukoodaan. Qaadashada tallaalka COVID-19 ayaa ah xulasho ammaan ah.
Goorma ayaan heli karaa tallaalka COVID-19?
Fadlan isticmaal COVID-19 Helista Tallaalka si loo helo loona ballansado ballan. Markaad jadwal u samaynaysid qof 12 ilaa 17, hubi meesha aad dooratay inay maamusho tallaalka Pfizer, oo ah tallaalka keliya ee hadda loo oggol yahay dadka da'daas ah. Qof kasta oo raba tallaalka COVID-19 wuu awoodaa inuu helo, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda caymiska caafimaadka.
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad u baahan tahay caawimaad jadwalka ah tallaalka COVID-19, wac 1-833-VAX-CAAWIMAAD (1-833-829-4357), ka dibna taabo #. DOH waxay u qoondeyneysaa ballamo dadka soo wacaya waxayna ku siin kartaa marinno bilaash ah iyo raqiis raaca ballamaha ballamaha tallaalka. Caawinaad luqadeed ayaa la heli karaa.
Halkeen ka heli karaa tallaalka?
Isticmaal Qalabka helitaanka tallaalka ee DOH si aad u hesho ballamo tallaal oo laga heli karo COVID-19 oo kuu dhow (50 mayl gudahood). Goobta tallaalka waxaa ku jira helitaanka ballanta waqtiga-dhabta ah iyo faahfaahinta jadwalka ballanta. Qalabka waxaa lagu heli karaa in ka badan 30 luqadood.
Waxaad sidoo kale ka hubin kartaa rugta caafimaadka bulshada ee kuugu dhow ama xafiiska dhakhtarka si aad u ogaato inay tallaalka bixinayaan iyo in kale.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu yahay mid guriga ka baxa oo aan awoodin inuu u safro goob tallaal, waxaad ku heli kartaan tallaal gurigaaga. Buuxi sahan Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington si aad u codsato adeeg. Haddii aad su'aalo qabtid, emayl u soo dir [emailka waa la ilaaliyay].
Ilmahaygu ma iska tallaali karaa COVID-19?
Ingiriisigu maahan afkayga koowaad. Ma heli karaa macluumaadka tallaalka COVID-19 oo ku qoran luqado kale?
Haa. CDC wuxuu leeyahay bogga macluumaadka macluumaadka tallaalka inaad ku arki karto luqado kale. Kaliya guji tabka "Luqadaha".
Sources: Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, Johns Hopkins Medicine, Waaxda Caafimaadka ee Washington, Akadamiyadda Mareykanka ee Dhakhaatiirta Qoyska, Ururka Qaranka ee Xarumaha Caafimaadka Bulshada, CNN
Waxa aan sameyneyno si aan u caawinno
Kooxdayadu waxay taageereysaa:
Xubnaha bulshada iyo bukaanka iyagoo ka caawinaya shakhsiyaadka inay helaan daryeel caafimaad bulshadooda, isku xirka qoysaska maxalliga ah iyo kuwa ay jecel yihiin ilaha, iyo la xiriirida in ka badan 40,000 oo reer Washington ah si loo hubiyo in baahiyahooda lagama maarmaanka ah la daboolay intii lagu jiray dhibaatada.
Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyaga oo hogaaminaya wacyigelin iyo dadaal isgaarsiineed oo ku saabsan COVID-19, gacan ka geysashada bixinta adeegyada telehealth, iyo la shaqeynta bixiyeyaasha si loo hubiyo daryeelka aan kala go 'lahayn ee bulshada Washington ee aadka u liidata.
Bulsha weynta oo kaqeybqaadata wadayaasha cuntada, ku tabarucida ururada aan macaash doonka aheyn, qabashada adeega bulshada, iyo la wadaagida qibradooda daryeel caafimaad, oo ay kujiraan talooyinka kor uqaadida caafimaadka maskaxda ee togan inta lagu jiro aafada.
Waxaan sidoo kale taageereynaa sharciga soo socda iyo mudnaanta sharci dejinta:
Maritaanka xirmooyinka gargaarka ee COVID-19 oo dheeraad ah oo ay heli karaan qoysaska muhaajiriinta ah iyo kuwa qaxootiga ah.
Dib-u-oggolaanshaha koongareeska ee Sanduuqa Xarunta Caafimaadka Bulshada.
Mamnuuca howlaha ICE ee gudaha iyo agagaarka xarumaha daryeelka caafimaadka.
Taageero lacageed oo loogu talagalay adeegyada turjumaada ee hubiya soogalootiga iyo qoysaska qaxootiga inay helaan daryeelka ay u baahan yihiin.